Ungayihambela kanjani ingqungquthela yokubhuloga engu- $ 2,000 ye- $ 49 | Martech Zone
Ungayihambela kanjani ingqungquthela yokubhuloga engu- $ 2,000 ye- $ 49
NgoLwesithathu, July 16, 2008 NgeSonto, Okthoba 21, 2012 Douglas Karr
Kunezingqungquthela ezimbalwa zokubhuloga ezenzeka ezweni lonke unyaka nonyaka. Inani lokuya engqungqutheleni yokubhuloga likhulu kakhulu, likudalula ekusebenziseni izinjini, ukukopisha ukubhala, ubuchwepheshe be-blog nokuthi ungenza kanjani ukuthi ukubhloga kwakho kube nenzuzo. Kungakho ababekhona abaningi bakhokha ngaphezulu kwe- $ 2,000 ukuya kulezi zingqungquthela.
Awudingi ukukhokha u- $ 2,000, noma kunjalo! Uzwakala kanjani u- $ 49?
Ama-blogger endawo avela phesheya kwe-Indiana azohlangana e-IUPUI Campus Center ngo-Agasti 16-17th, 2008, we I-Blog Indiana 2008, ingqungquthela yezinsuku ezimbili yokubloga kanye nemidiya yezenhlalo ehlose ukukhuthaza imfundo, ukuqamba kanye nokubambisana phakathi komphakathi wase-Indiana okhula ngokushesha. Ingqungquthela ixhaswe yi-IU School of Informatics.
I-Blog Indiana 2008 iyinkomfa yezinsuku ezi-2 yabo bobabili ababhulogi abanolwazi nabasha ngokufanayo. Amaseshini azofaka izihloko ezinjengokubhuloga kwabaqalayo, ukusebenzisa amabhulogi ebhizinisini lakho, ukwenza imali ngebhulogi yakho, ukubhuloga kwezepolitiki nezihloko ezithuthuke kakhulu. Esikhathini esedlule, izingqungquthela eziningi zokubloga nezobuchwepheshe beziye zabiza kakhulu noma zaphuma kakhulu ezweni. Ibhulogi i-Indiana 2008 ifuna ukuletha ingqungquthela eshibhile, nenani eliphakeme kuma-blogger Hoosier.
Abafundi, ama-hobbyists kanye nochwepheshe bayakhuthazwa ukuthi babekhona kwinethiwekhi futhi bafunde. Isipiliyoni sokubhuloga noma imithombo yezokuxhumana akuyona imfuneko yokubamba iqhaza; noma ngubani onentshisekelo kwezobuchwepheshe kanye nabezindaba abasha wamukelekile ukuba abe khona.
Ukuhlala kukhawulelwe kubahambeli abangu-200.
The Isikhungo se-IUPUI Campus esikhungweni se-IUPUI e-Indianapolis, IN
Kungani u- $ 49?
Lowo ngumbuzo wamarandi ayizigidi, akunjalo? Le ngqungquthela ayikho emayelana nokukhokha imali eshisiwe yezipikha zama-blogger ohlu olungu-A. Imayelana neqoqo labachwepheshe lapha esifundeni elizama ukusiza abanye abantu ukuthi baqale lokhu ku-Social Media nokubhuloga. Futhi kumayelana nokuxhuma sonke esibloga ngentshiseko njengamanje. Akungabazeki ukuthi uzohamba kule ngqungquthela uphethe izeluleko nezinkumbulo ezingabiza u- $ 2,000 - kepha akukhulunywa ngemali.
Bhalisa ngenkathi kusele izihlalo!
Bhalisa Namuhla! Izihlalo zikhawulelwe futhi zihamba ngokushesha.
Tags: blog indianaingqungquthela yokublogaumcimbiIndianaumcimbi wokumaketha
Phumula ngokuthula, Umngane Wami uMike
Imithombo Yezindaba Emathathu
Jul 16, 2008 ngo-8: 51 PM
Lokhu kuhle kakhulu. Kuyangikhuthaza impela ukuthi ngicabange ukuthi ingasebenza kanjani ingqungquthela enhle yaseMid-Atlantic enezinhloso ezifanayo. Kukhona inyuvesi ehloniphekile ebangeni elingamakhilomitha ambalwa nje ngomgwaqo (UVA)… hmmm. Kucishe kungifanele ukugxumela emotweni bese ngiya e-Indiana ngalezo zindleko.
Jul 21, 2008 ngo-9: 08 PM
Ngiyaqiniseka ukuthi ingqungquthela izoqhuma! Okuthunyelwe okuhle! Bengikhuluma ku-blogher ngiphuthelwe ukuthumela ngeBlog Indiana ngesonto eledlule - kuzofanele ngibhale ngakho kuleli sonto!
Bheka phambili ukuhlangana nawe lapho!